Nagarik Shukrabar - सेक्स शारीरिकमात्रै होइन,मानसिक क्रिया
शनिबार, ०७ साउन २०७४, ०१ : ४८ | शुक्रवार , Kathmandu
म अहिले ५७ वर्षको भएँ । मेरी श्रीमतीलाई यौन सन्तुष्टि दिएर खुुसी राख्न चाहन्छु । थुप्रै प्रकारका औषधि खाइसकेँ । भियग्रा पनि प्रयोग गरिसकेको छु । भियग्रा विभिन्न नाममा उपलब्ध हुँदो रहेछ । कुनैले काम गरे जस्तो लाग्छ, कुनैले भने काम गरेको जस्तो लागेन । मजस्ता उमेर ढल्केकाले श्रीमतीलाई यौन सन्तिुष्ट दिन के गर्नुपर्ला ? नियमित भियग्रा सेवन गर्दा यसको साइट इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन ?
आफ्नी श्रीमतीको यौन सन्तिुष्टप्रति तपाईंले देखाउनुभएको चासो तारिफयोग्य छ । यसले तपाईंहरूको पारिवारिक तथा यौन जीवन सुमधुर बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । ढल्कँदो उमेरमा आउने सक्ने यौन समस्याप्रति तपाईं सजग हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो । तपाईंको उमेरकाहरूले यौन जीवनलाई सुखमय बनाउन केही विधि अपनाउन सकिन्छ । प्रश्नमा तपाईंले आफ्नी श्रीमतीको उमेर पनि लेख्नुभएको भए मलाई सुझाव दिन अझ सजिलो हुने थियो ।
तपार्इंको उमेरलाई विचार गरेर एक÷दुई कुरा भन्न मन लाग्यो । भियग्रा खानुअघि तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्नुभएको थियो ? भियग्रा इरेक्टाइल डिस्फंक्सन (उत्तेजना समस्या) का लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा, यौन चाहना हुँदाहुँदै पनि सम्भोगका वेला लिङ्ग राम्रोसँग कडा नहुनु वा भएपनि कडा भइनरहनुलाई इरेक्टाइल डिस्फंक्सन भनिन्छ । यस्तो अवस्था धेरै कारणले हुन सक्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएमा, चुरोट बिँडी धेरै खाएमा, थाकेमा, तनावग्रस्त भएमा र अत्यधिक मदिरा सेवन गरेमा पनि लिंग कडा नहुन सक्छ । साथै, अरू कुरा पनि हुन्छन् । तपाईंको उमेरमा पुरुष आफ्नो यौनशक्तिलाई लिएर चिन्ता गर्न थाल्छ । सबैभन्दा पहिले तपाईं आफ्नो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गराउनुस् र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार भियग्रा लिनै परे लिनुहोला ।
भियग्राले लिंगको उत्तेजनालाई कायम राख्नमात्र मद्दत गर्छ । यौन चाहना बढाउने वा अरू कुरामा यो सहयोगी हँुदैन । धेरै मानिसले भियग्रा मनोरञ्जनका लागि पनि सेवन गर्ने गर्छन् । हामी हरेक कुराको कि त राम्रो पक्ष मात्र हेर्छाैं, कि त नराम्रो मात्र । कुनैपनि औषधि साइड इफेक्टर(प्रतिप्रभाव) रहित हुँदै हँुदैन भन्ने चाहिँ होइन । भियग्राको सेवनपश्चात् तपाईंको जीउ चिलाउन थाल्यो, सास लिन गाह्रो भयो, मुख, ओठ, जिब्रो र खट्टा सुनिन थाले, आँखामा अँध्यारो भयो, कानमा आवाज आउन थाल्यो, लिंगको उत्तेजना चार घण्टाभन्दा बढी भएमा र लिंग दुखेमा तुरुन्त डाक्टरलाई खबर गरिहाल्नुस् ।
मुटुसम्बन्धी कुनै औषधि खाइराख्नुभएको छ भने त्यससँगै भियग्रा खाँदा रक्तचापलाई सामान्यभन्दा धेरै तल पु¥याउन सक्छ । यसका कारण बेहोस हुनेदेखि पक्षघात र हृदयाघातसम्मको खतरा पनि ल्याउन सक्छ । भियग्रा एकपटक खाइसकेपछि २४ घण्टासम्म अर्को पटक लिनु हुँदैन र सम्भोग गर्नुभन्दा आधा घण्टा अगाडि लिनुपर्छ । एकपटक लिँदा एक चक्की (पाँच एमजी) भन्दा बढी लिनु हुँदैन । काम गरेन भनेर एकभन्दा बढी चक्की लिने गरेको पनि पाइन्छ । यसले नराम्रो असर पु¥याउन सक्छ ।
भियग्रा डाक्टरको सल्लाहअनुसार लिने औषधि हो । जथाभावी, आफूखुसी पसल वा औषधिपसलबाट किनेर भियग्रा नखानुहोला । बजारमा यसको माग बढेको हुनाले कमसल खालका भियग्रा पनि पाइन्छन् ।